FIFANDONANA NITERAKA RATRA :: Frantsay iray sy Malagasy iray voaheloka higadra folo taona • AoRaha
FIFANDONANA NITERAKA RATRA Frantsay iray sy Malagasy iray voaheloka higadra folo taona
Samy voaheloka higadra folo taona an-trano- maizina sazy mihatra avokoa ny teratany frantsay iray sy malagasy telo, omaly, teny amin’ny lapan’ny Fitsarana Anosy. Voaheloka ho isan’ny ao anatin’ny fikambanan-jiolahy sy nikasa hamono olona izy ireo. Efa nigadra nandritra ny enina ambin’ ny folo volana teny amin’ ny fonjan’Antanimora io teratany vahiny io sy ny iray tamin’ireo Malagasy. Namoahan’ny Fitsarana didy fampisamborana kosa ireo roa lahy hafa izay tsy niatrika ity Fitsarana ity. Fanakalozana vola vahiny niafara tamin’ny fifampikasihan-tanana no nahatonga an’ izao fanamelohana izao.
Taorian’ny ora efatra nifandimbiasan’ny mpitory sy ireo voampanga nandray fitenenana nanoloana ireo mpitsara, niaraka tamin’ireo mpisolovava azy ireo tsirairay avy, dia namoaka io didy io ny filohan’ny Fitsarana. Niezaka hatramin’ny farany niaro tena ireo voampanga saingy tsy nanakana ny fanamelohana izany noho ny fiovaovan’ ireo taratasy fiarovana avy amin’ireo voampanga.
Tamin’ny 9 marsa 2017 no nitranga ity raharaha ity, tao amin’ny trano fandriam-bahiny iray teny Ampasamadinika. Niantso mpanakalo vola vahiny ilay Frantsay fa milaza hanakalo vola mitentina 3 000 euros. Rehefa tonga tao anefa ny mpanakalo vola dia voalaza fa niharan’ny vono ka hita nitsirara tamin’ny tany sady nihosin-dra. Very tamin’ izany ny vola mitentina 24 tapitrisa ariary. Ny alin’ io ihany dia voasambotry ny polisy ilay vazaha sy ny namany iray teny Itaosy. Ny ampitso kosa no tratra ireo mpiray tsikomba- komba roa lahy teny Itaosy ihany. Mbola nahatrarana vola mintentina 11 tapitrisa ariary tany amin’ireto farany nandritra ny fisamborana. Nilaza ny hampiakatra ny raharaha ireo voaheloka, izay naneho ny tsy fahafaham-pony tamin’ity didim-pitsarana ity.
LOZA TANY ARIVONIMAMO :: Hanomboka anio ny fakàna am-bavany an’ireo naratra
LOZAM-PIARAKODIA TANY FRANTSA :: Lehilahy sy vehivavy bevohoka malagasy nipitika tao anaty fiara